overwatch – Gaming Noodle
Activision Blizzard ဂိမျးပွိုငျပှဲကွီးမြားကို YouTube တဈမြိုးထဲတှငျသာ ပွသတော့မညျ
[Unicode] Activision Blizzard ဂိမျးပွိုငျပှဲကွီးမြားကို YouTube တဈမြိုးထဲတှငျသာ ပွသတော့မညျ ဗီဒီယိုဂိမျးကုမ်ပဏီကွီးတဈခုဖွဈတဲ့ Activision Blizzard ဟာ ကမ်ဘာ့အငျအားကွီးအငျတာနကျကုမ်ပဏီ Google နဲ့ သဘောတူ ပူးပေါငျးမှုမြားကို မကွာသေးမီက ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ယငျး ပူးပေါငျးမှုမြားထဲမှာမှ အရေးကွီးဆုံးအခကျြတဈခုကတော့ Activision Blizzard ကပွုလုပျတဲ့ Overwatch League နဲ့ Call of Duty League တို့လို ဂိမျးပွိုငျပှဲကွီးမြားရဲ့ တရားဝငျ stream မြားကို YouTube တဈမြိုးထဲပျေါမှာပဲ ပွသဖို့ သဘောတူညီလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုသဘောတူညီလိုကျနိုငျတာဟာ YouTube အတှကျတော့ ကွီးမားတဲ့ ရလဒျကောငျးတဈခုပါ။ YouTube ဟာ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးဗီဒီယိုဝကျဘျဆိုကျတဈခုဖွဈပမေယျ့ streaming platform ဈေးကှကျမှာတော့ Twitch နဲ့ …
Activision Blizzard ဂိမျးပွိုငျပှဲကွီးမြားကို YouTube တဈမြိုးထဲတှငျသာ ပွသတော့မညျ Read More »
နာမည်ကြီး Esports ဂိမ်းတွေမှာ အမုန်းစကားတွေပြောရင် ဘယ်လို ဒါဏ်ပေးခံရမလည်း?
[Zawgyi] နာမည်ကြီး Esports ဂိမ်းတွေမှာ အမုန်းစကားတွေပြောရင် ဘယ်လို ဒါဏ်ပေးခံရမလည်း? အွန်လိုင်းဂိမ်းမျိုးစုံရဲ့ ကစားပွဲများမှာ ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့သူစိမ်းများကတော့ အမြဲနီးပါး ပါဝင်နေလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကစားဖော်ဖြစ်စေ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စေ ပွဲအတွင်းကြုံတွေ့လာတဲ့ သူစိမ်းများနဲ့ စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်ရင်တော့ စကားပြောရင်း ကတောက်ကဆဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ racist စကားလုံးများနဲ့ အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့ trash talk များကိုတော့ မပြောသင့်ကြောင်း အများကလက်ခံထားကြပြီး ဂိမ်းအတော်များများမှာ ထိုစကားလုံးပြောတဲ့သူများကို အပြစ်ပေးစနစ်များ ရှိနေကြပါတယ်။ Ubisoft ဟာ Rainbow Six: Siege ထဲမှာ racist စကားလုံးပြောသူ များပြားလာလို့ ဖြေရှင်းဖို့ ဖိအားပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ developer များဟာ game chat အတွင်းက racist ပြောသူများကို …
နာမည်ကြီး Esports ဂိမ်းတွေမှာ အမုန်းစကားတွေပြောရင် ဘယ်လို ဒါဏ်ပေးခံရမလည်း? Read More »